नेपालकै ठूलो गाई फार्म, जहाँ मेसिनले दुहिन्छ पाँच सय गाई (भिडिओ रिपोर्ट) - Video blogging portal of Nepal
नमूना फार्म :
चितवन । लहरै देखिने गाई गोठ । आडैमा ठूलो क्षेत्रफलमा घाँस खेती । चितवनको खैरहनी नगरपालिका कुमरोज छ लालिगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर । जहाँ आधुनिक प्रविधि अपनाएर खोलिएको छ नेपालकै ठूलो गाई फार्म ।
उक्त फार्ममा गाईलाई दाम्लोले बाँधिदैन । गाई स्वतन्त्र आफ्नै गोठमा घुमिरहन्छन् । कामदारहरु आ—आफ्नो जिम्माको काम गरीरहेका हुन्छन् । लालिगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नयाँ प्रविधि अनुसार गाई गोठ बनाइएको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । फार्ममा विहान पाँच बजे र दिउँसोको चार बजे दूध दुहिन्छ त्यो पनि मेसिनबाट । दूधालु गाईहरु आफैं अत्याधुनिक प्रविधिको दूध दुहुने मेसीनसम्म पुग्छन् ।
मेसीनले नै कुन गाईले कति दूध दियो ? दूधको फ्याट कति छ ? त्यो गाईको तौल कति छ ? सबै पत्ता लगाइदिन्छ । लालिगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा छ ।
यो नेपालकै नमूना गाई फार्म हो । यति ठूलो र सुविधा सम्पन्न गाई फार्म नेपालमै छैन । फार्ममा दूधालु गाईको लागि छुट्टैै गोठको व्यवस्था छ भने सुत्केरी गाई, लैना बाच्छाबाच्छी बस्नको लागि छुट्टै गोठ बनाइएको छ ।
यति रहरलाग्दो गाई फार्म बनाउन सहकारीले मन खोलेर लगानी गरेको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी भएकाले पनि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै अनुरुप सहकारीले कृषि अन्र्तगत गाई फार्ममा लगानी गरेको कार्यकारी प्रमुख भण्डारी बताउँछन् ।
चितवनमा २० बिगाह जग्गा खरिद गरी गाई फार्म सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार बाहेक अन्य खर्च समेत जोड्ने हो भने यो फार्ममा झण्डै ४० करोडको लगानी भईसकेको छ ।
बिगाह क्षेत्रफल अन्र्तगत ७ बिगाहमा गाई फार्म छ भने भाडामा लिएको २८ बिगाहसहित बाँकीमा घाँस खेती गरिएको छ । ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइएको घाँसलाई थप प्रशोधन गरेर गाई गोठसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
बगानमा उन्नत जातको घाँस लगाइएको छ । जुन एकपटक रोपेपछि वर्षौसम्म काट्न सकिन्छ । गाईहरुलाई अहिले आफ्नै बगानको घाँस खुवाइएको छ । केहि मात्रमा पराल पनि ।
दुहुना गाईबाट उनिहरुको क्षमता अनुसार दूध निकाल्न उनीहरुको खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले होला दाना उत्पादनको लागि आफ्नै कारखाना छ । लालिगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरमा अहिले पाँच सय ५० भन्दा धेरै गाई छन् । जसमा २ सय बढी दूधालु गाई छन् ।
दैनिक ५ सयदेखि २ हजार लिटरसम्म दूध उत्पादन हुन्छ । दूध सोझै भक्तपुरको एक डेरीमा ल्याइन्छ । केहि समयपछि भने सहरकारीले आफ्नै डेरी सञ्चालन गर्नेछ । जहाँ दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन हुनेछ ।
फार्मबाट अहिले भईरहेको उत्पादनले लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको चित्त भने बुझेको छैन । भौतिक पूर्वाधारको रुपमा हेरिने गोठको व्यवस्थापन राम्रो भएपनि समग्र गाईको स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्न भने सकिएको छैन ।
गोठमा गाईको भन्दा गोरुको संख्या बढी भयो भने किसानको लगानी डुब्छ । ‘त्यसैले पनि कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा बहरको तुलनामा बाच्छी जन्मने सम्भावना बढी भएको प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक छ’ भन्छन्, कार्यकारी प्रमुख भण्डारी ।
नेपालमा भैंसी पाल्नमा जस्तो सजिलो गाई पाल्न छैन । उत्पादन दिन छोडेको गाईलाई के गर्ने ? किसानहरु अन्यौलमा छन् । नेपालमा दैनिक दूग्धजन्य पदार्थ बाहेक पाँच लाख लिटर दूध मात्रै खपत हुन्छ । नेपालको उत्पादन भने मात्र साढे तीन लाख लिटर छ । बाँकी दूध भारतबाट आयात हुन्छ ।
तथ्यांक अनुसार वार्षिक नेपालमा पाउडर दूधसहित गरेर २० खर्ब लिटर दूध आवश्यक पर्छ । त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि मेघा प्रोजेक्टको रुपमा लालिगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरको स्थापना भएको कार्यकारी प्रमुख भण्डारी बताउँछन् ।
फार्म स्थापना गर्नु पूर्व अध्ययन मै तीन वर्ष बित्यो । अहिले फार्म सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ । यो बीचमा लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था किसानको गोठगोठमा पुग्यो । नेपालमा व्यवसायिक गाईपालन, त्यसको चुनौति र अवसरको गहिराईमै पुगेर अध्ययन गर्यो ।
नेपालकै नमूना गाई फार्मले अझै पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । अबको पाँच वर्षभित्रमा भने लालिगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरले पूर्णता पाउने भण्डारीको भनाइ छ ।
फार्ममा अहिले जर्सी, जर्सी क्रस, होलीस्टेन क्रस र साईवाल क्रस जातका गाई छन् । यी जातका गाई विशेष गरेर युरोपेली राष्ट्रमा पाईन्छ । पूर्ण रुपमा लालिगुराँस डेरी फार्म सञ्चालन हुन थालेपछि यी जातका दूधालु गाईहरु किसानको गोठगोठमा पुग्नेछन् ।
लालिगुराँसको आफ्नै रिचर्स सेन्टर समेत छ । जहाँ व्यवसायिक रुपमा गाई पाल्न थालेका किसानलाई परामर्श दिने काम हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख भण्डारीका अनुसार व्यवसायिक रुपमा गाई पाल्ने किसान तथा संस्थालाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने व्यवस्था समेत हुनेछ ।
व्यवसायिक गाई पालनमा लागेको किसानहरुले आगामी दिनमा राम्रै बजार पाउने उनको भनाइ छ । तर, राज्यले भने किसानमैत्री नीति ल्याउन जरुरी छ । राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
Tags :गाई फार्मदूधपशुपालन